Yeroo ammaa akka dirree tokkootti saaga. Yeroochi qinda'ina sirnaa, sirna dalagaa kee irraa qixaan fudhaame. Dhangiin yeroo dhaabbataa inii qabduu dalagaa F9 fayyadamuun hinharoomnee fayyadamameera.
Saagi - Dirreewwan - Sa'aatii filadhu
Dhangii yeroo addaa tokko ramaduuf, yk deetaa yeroo amjiraa beeksiissuuf, Insert - Fields - Other fili, akkasuumas jijjiirama barbaaddee qaaqa Dirreewwan keessatti tolchi. Dabaaleesi, dhangiin dirree deetaa saagamee yeroo barbaaddeeti akka fooyya'uu danda'uuf, Gulaali - Dirreewwan filachuu nidandeessa.
Title is: Sa'aatii